Maxaa looga hadlayaa kulanka Garowe uga soconaya madaxda Federaalka iyo Maamulada [DAAW0] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maxaa looga hadlayaa kulanka Garowe uga soconaya madaxda Federaalka iyo Maamulada [DAAW0]
Maxaa looga hadlayaa kulanka Garowe uga soconaya madaxda Federaalka iyo Maamulada [DAAW0]
January 27, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa kulan uu uga socdaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahu Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Ilo wareedyo ay warbaahintu helayso ayaa sheegaya in kulanka diirada lagu saarayo sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafyada siyaasadeed iyo mad madowga wali ku dhex jira madaxda Dowlada dhexe iyo kuwa maamul Goboleedyada.
Inkastoo faahfaahin dheeraad ah aan laga heli karin kulanka ka soconaya magaalada Garoowe hadana ilo madaxbanaan oo la helayo waxa ay sheegayaan in uu jiro isfahan la xiriira soo afjaridda khilaafka madaxda Dowlada Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Wararka qaar aan helayno ayaa sheegaya in kulanka uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha Puntland Dr. siciid Cabdulaahi Deni isla markaana qorshuhu uu yahay sidii ay u wada hadli lahaayeen madaxda maamulada iyo madaxweynaha soomaaliya.
Lama oga waxa kasoo bixi kara kulanka hase ahaatee waxaa jira isku soo dhawaansho madaxda dowlada Federaalka iyo maamul Goboleedyada wixii ka dambeeya xafladda caleemo saarka madaxweynaha Puntland.
Si kastaba ha ahaatee saaka ayay ahayd markii madaxdan ay kasoo muuqdeen quraac sharafeed uu ku martiqaaday madaxweynaha Puntland taas oo ka dhacday madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe.